Ngaba ama-702 j lukhetho olufanelekileyo kwisicwangciso sakho somhlala-phantsi? - Estate And Financial Planning
Iinwele Salons Ne Beauty Salons
Ngaba ama-702 j lukhetho olufanelekileyo kwisicwangciso sakho somhlala-phantsi?
I-702 (j) ayisosicwangciso somhlala-phantsi, nangona uninzi lweearhente zemali zizama ukuyithengisa injalo. Endaweni yoko, yipolisi yeinshurensi yobomi iphela enexabiso lemali. Oku akufuneki kuthathwe njengenye indlela eya kuma-401 (k) okanye kwi-IRA ngeenjongo zokuphila kamnandi ngaphakathiumhlalaphantsi.
702 (j) Kucacisiwe
Le akhawunti yiipolisi yeinshurensi yobomi- hayi iakhawunti yotyalo mali. Bonke obu bomi (bukwabizwa ngokusisigxina) kwimigaqo-nkqubo yeinshurensi ebonisa iintlawulo zenyanga ezihlawula ipolisi yeinshurensi yobomi; nasiphi na isabelo esihlawulwe ngaphezulu kwesixa esifunekayo senyanga sepolisi siba lixabiso lemali yepolisi. Iintlawulo zizonke azenzi ixabiso elipheleleyo lemali yomgaqo-nkqubo kuba iifizi kunye neekhomishini zihlala zithathwa kwiintlawulo. Ixabiso lemali lomgaqo-nkqubo linokubairhoxisiweokanye obolekwe ngokuchasene, kodwa oko kunciphisa imali ekhoyoabaxhamliekufeni kwakho.
Imali kwiPolisi ye-Inshurensi yoBomi
Kuthengiswa njengoMgaqo-nkqubo woTyalo-mali
Abanye abameli beinshurensi bazama ukubonisa imigaqo-nkqubo engama-702 (j) njengeakhawunti yotyalo-mali kubathengi abafuna ukugcina umhlala-phantsi. Ezi ziakhawunti zekhomishini ephezulu ngokubanzi zabathengisi kwaye bazama ukusebenzisa igama '702 (j)' ngokungathi kukudibana okufutshaneI-401 (k). Ngapha koko, i-702 (j) ifumana igama layo kwi Ikhowudi yangaphakathi yeNgeniso yaseMelika i-7702 , echaza imigaqo-nkqubo yeinshurensi yobomi kunye nemithetho yerhafu kubo.
Iingcali zezezimali ziyathanda UDave Ramsey ukucebisa malunga nokuthenga i-inshurensi yobomi ngexabiso lemali ikakhulu kuba le migaqo-nkqubo ibiza kakhulu kune-inshurensi yobomi yexesha. Ngenyanga, umgaqo-nkqubo wekota wobomi uya kubiza imali encinci kakhulu kunepolisi yobomi iphela. Ukuba ujonge ngokungqongqo kwi-inshurensi kwaye awuchaphazeleki ngumgaqo-nkqubo onexabiso lemali ngaphambi kokuba usweleke, i-702 (j) ayenzi ngqondo ngathi ngumgaqo-nkqubo weinshurensi.
Xa lukhetho oluSebenzayo
I-702 (j) inokuba nengqondo kwiqela elikhethiweyo labantu: abo babakhuphele ngaphandle401 (k) kunye ne-IRAkwaye ndikhangela indawo yokubeka imali apho iya kuthi yenzeke khula ngaphandle kwirhafu . I-702 (j) akufuneki isetyenziswe njengendawo yokutshintsha iiakhawunti zomhlala phantsi kodwa endaweni yoko kufuneka ithathelwe ingqalelo njenge-inshurensi yobomi enokubolekwa xa kukho imfuneko. Qaphela ukuba ukusilela ekubuyiseni imali mboleko ekhuselwe ngumgaqo-nkqubo wama-702 (j) kunokubangela isohlwayo esongezelelweyo okanye ukuphulukana nexabiso lemali yomgaqo-nkqubo. I-702 (j) inokuba nengqondo kwi umrhafi osisityebi ngubani ofuna indawo ethile yokugcina imali engazukuchaphazela ukufaneleka kwemicimbi ethile ye-Medicare kwaye angabali njengengeniso xa ejonga ukuba yeyiphi na inxalenyeIzibonelelo zoKhuseleko lweNtlalozirhafiswa.
702 (j) Scam vs Policy
I-702 (j) ayisiyiyo, embindini wayo, eyilelwe ukuba ibe sisikrelemnqa, kodwa abanye abantu bayithatha njengobuqhetseba ngenxa yokuba ithengiswa njani. Xa abathengisi bezama ukubonisa i-702 (j) njengayo nayiphi na into ngaphandle komgaqo-nkqubo weinshurensi yobomi, ayithembeki ngokuqinisekileyo. Ngelixa kukho imigaqo-nkqubo engama-702 (j) ekhoyo ethiwe thaca ngokucacileyo kwaye ingabonakalisi mali eninzi, ikwakhona nemigaqo-nkqubo engama-702 (j) ethiwe thaca njengethuba lotyalo-mali kwaye inenani elothusayo lemirhumo (isibonelelo kuphela yomthengisi). Ukuba uthatha isigqibo, emva kokuxoxa ngokhetho lwakho nomcebisi wakho wezezimali, ukuba i-702 (j) lukhetho olufanelekileyo kuwe, uqonde ngokupheleleyo ukuba yintoni i-702 (j) kwaye ayisiyiyo ngaphambi kokuba usayine kumgca ochaziweyo.
Funda Isifrentshi Umlibo Wokuzalwa Uphando I-Trailer And Rv Camping Ufeng Shui Imiboniso Yesilayidi Umgangatho Iimbono
Ukulawula Your Credit
Iinkonzo Zematriki Citizen
Umlambo Boat Cruise
Umntu Ne Superhero Costumes
yintoni unobangela wokufa kolutsha
Zingakanani iincwadi ezindala ezihlekisayo ezixabisekileyo
ulifumana njani ibala leoyile kwikhonkrithi
Ngaba i-taurus kunye ne-leos ziyavana
uyisusa njani itatoo engeyiyo
Yeyiphi inkwenkwezi ye-iconic eqale njenge-dancer yogcino ngaphambi kokwenza enkulu?
Ubuhle Product Iingxelo Kwakhona